Himalaya Dainik » किन नेपाली हिरोइन छातीमै खोप्छन् टाटु ?
किन नेपाली हिरोइन छातीमै खोप्छन् टाटु ?
नेपाली र हलिउड हिरोइनमा के भिन्नता छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ जति सजिलो छ, उत्ति नै गाह्रो पनि । भन्नेहरु भन्छन्, ‘नेपाली चलचित्रका हिरोइन र हलिउडको तुलनै गर्न मिल्दैन ।’ हो, वास्तवमै कलिउड भनिने नेपाली चलचित्र र हलिउड तुलना गर्ने समय नै आएको छैन । यसो पनि भनिन्छ, ‘नेपाली हिराइनहरु हलिउडको ठीक उल्टो छन् ।’ यो कुरा हिरोइनहरुले आफ्नो शरीरमा खोपेको टाटुले पनि बताउँछ ।
हलिउडका हिराइनले आफ्नो शरीरको पछाडि टाटु हान्ने गरेका छन् । हलिउडकी चर्चित हिरोइन एन्जेलिना जोलीदेखि लिएर जेनिफर लोरेन्ससम्मले आफ्नो ढाँडमा टाटु खोपेका छन् । यता नेपाली नायिकाहरुले भने आफ्नो छाती (स्त नकै छेउ) मा टाटु खोप्ने गरेका छन् ।
नायिका करिश्मा मानन्धरदेखि सुष्मा कार्कीसम्मले आफ्नो छातीमाथि टाटु खोपेका छन् । यी दुईले मात्र नभएर अर्की नायिका जिया केसीले पनि छातीमै टाटु खोपेकी छन् । हलिउड अर्थात् अमेरिकारित नेपालीलाई ‘बीर गोर्खाली’ भनेर चिन्छन् । त्यसैले नेपाली नायिकाहरुले बीरताको चरितार्थता प्रष्टाउन छातीमै टाटु खोपाएर देखाएका त होइनन् ? यो गसिपकारको नीजि प्रश्न हो ।